[Ekonomia ] 19 Aprily, 2008 08:39
Dia mahita atao mihitsy ity media consulting ity ka, hainy mihitsy ny mitady vola izay no azo ilazana azy, satria dia ho entiny etsy @ lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahan-tena indray izany ny vokatra vita sinoa manomboka ny 24 aprily ka h@ 27 aprily ho avy izao! tsy ho latsan-danja @ io zany fa afotaka ny fihinana lasopy sinoazy sy ny tsatsio kano! manginy fotsiny ny telefonina finday sy ny "menuiserie en aluminium" na ny rafitra vy ranty!!! izay tena kapoakany tokoa, eo koa my moto sy scooter sy ny maro hafa... enga anie ka mba izay tena raitra no omeny ny mpanjifa @ ity indray maka ity fa tsy ilay mora simba mampalaza ny sinoa ihany koa.
Hivoaka ato ato ihany koa ny moov 3G+ tolotra vaovao omeny ny mpamongady aterineto voalohany eto Madagasikara na ny MOOV izany. Afaka mampiasa azy ity avy hatrany moa ianao fa tsy misy ny atontan-taratasy be ilaina akory. Karazana "Clé USB" izy ity ary azo antoka fa misy irony "puce" kely irony atsofoka ao anatiny dia zay! afaka manome "debit" hatrany @ 384Kbps izy ity, raha 256Kbps ny tolotra telma sy ny orange net! mafinaritra fa afaka mifidy izay tiany ny mpanjifa ary tena tokony mba hidina ihany koa ny sandan'ny aterineto!
Hamokatra simenitra ihany koa etsy Ambohimanambola ry zareo sinoa efa mipetraka ao daholo moa ny fitaovana isan-karazany ka tombanana hamokatra simenitra voalohany izy @ volana jiona na jiolay any ho any!